पेट्रोलको मूल्य घट्यो, अब कति? - Everest Dainik - News from Nepal
पेट्रोलको मूल्य घट्यो, अब कति?
काठमाडौं, जेठ २२ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त भएको मूल्य सूची अनुसार बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी निगमले पेट्रोलको मूल्य एक रुपैयाँ घटाएको हो।
निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य भने यतावत राखेको छ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यसमेत यतावत रहेको निगमका उपनिर्देशक विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । बुधबार मूल्य समायोजन भएसँगै पेट्रोलको मूल्य ११० रुपैयाँ पुगेको छ ।